Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fandefasana amin'ny vanim-potoana fialantsasatra, ny fikorontanan'ny rojom-pamokarana ary ny vokany amin'ny 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fandefasana amin'ny vanim-potoana fialantsasatra, ny fikorontanan'ny rojom-pamokarana ary ny vokany amin'ny 2022
Na dia toa nihena aza ny onja faharoan'ny Covid-19, dia mbola mitohy hatrany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana andavanandro ny faharavàn'ny areti-mifindra manerantany. Ny famatsiana vokatra ho an'ny mpanjifa, ohatra, dia tena tsy milamina. Miaraka amin'ny talantalana tsy misy na inona na inona any amin'ny mpivarotra biriky sy ny fahatarana amin'ny fandefasana entana avy amin'ireo mpivarotra an-tserasera, miatrika fisalasalana ny mpanjifa amin'ny fahazoana ny entana tadiaviny - indrindra ny firosoana amin'ny vanim-potoana fiantsenana. Tao anatin'ny Q&A fohy, Chris Craighead, Profesora John H. “Red” Dove ao amin'ny Fitantanana Chain Supply miaraka amin'ny University of Tennessee, Knoxville's Haslam College of Business ary manam-pahaizana momba ny fanelingelenana ny rojo famatsiana, vao haingana no niresaka momba ny fiantsenana sy ny fandefasana entana. olana rojo amin'ny ankapobeny.
Na dia toa nihena aza ny onja faharoan'ny Covid-19, dia mbola mitohy hatrany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana andavanandro ny faharavàn'ny areti-mifindra manerantany. Ny famatsiana vokatra ho an'ny mpanjifa, ohatra, dia tena tsy milamina. Miaraka amin'ny talantalana tsy misy na inona na inona any amin'ny mpivarotra biriky sy ny fahatarana amin'ny fandefasana entana avy amin'ireo mpivarotra an-tserasera, miatrika fisalasalana ny mpanjifa amin'ny fahazoana ny entana tadiaviny - indrindra ny firosoana amin'ny fotoam-piantsenana amin'ny fialantsasatra. Tao anatin'ny Q&A fohy, Chris Craighead, ilay Profesora John H. “Red” Dove ao amin'ny Fitantanana rojo famatsiana miaraka amin'ny Oniversiten'i Tennessee, Knoxville's Haslam College of Business ary manam-pahaizana momba ny fanelingelenana ny rojo famatsiana, vao haingana no niresaka momba ny fiantsenana sy ny fandefasana entana ary ny olana amin'ny rojo famatsiana amin'ny ankapobeny.
F: Ny US Postal Service dia manoro hevitra ny handefasana mailaka an-tsokosoko amin'ny 15 Desambra, mailaka voalohany amin'ny 17 Desambra, mailaka laharam-pahamehana amin'ny 18 Desambra ary mailaka laharam-pahamehana alohan'ny 23 Desambra. mety mandefa fanomezana alohan'ny Halloween mba hiantohana ny fanaterana mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Raha marina ireo tatitra ireo, olana ve izany?
A: Na dia tsy fantatro aza ny tena fikarohana ao ambadik'ireo tatitra ireo, mino aho fa ny mpanjifa dia tokony hanatona amin'ity taona ity amin'ny fomba hafa noho ny tamin'ny fotoam-pialan-tsasatra mahazatra taloha. Tena olan'ny rojo famatsiana izany. Olana amin'ny rojo famatsiana izany, satria ny olana fototra dia ny fahafahan'ny manatitra entana be dia be noho ny antony maro, toy ny tsy fahampian'ny asa sy ny fananana fitaterana (ohatra, kamiao, tranofiara). Ity fahafaha-manao voafetra ity indray dia mety hiteraka fihetsehana miadana kokoa sy mety ho fahatarana.
F: Inona no azon’ny mpanjifa atao mba hahazoana antoka fa tonga ara-potoana ny fividianana amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao?
A: Misy zavatra telo farafahakeliny azon'ny mpanjifa atao hanampiana amin'ny fandresena ireo fanamby mety hitranga.
Voalohany, manomboka aloha. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fanombohana teo aloha amin'ny fiantsenana / fandefasana dia mety hahasoa. Raha ampy ny mpanjifa manomboka aloha, dia hanampy amin'ny fisorohana ny fisondrotan'ny fandefasana entana amin'ny faran'ny volana Novambra sy ny fiandohan'ny volana Desambra izay mety hihoatra ny fahafaha-manatitra voafetra.
Faharoa, esory ny entana fanampiny. Ohatra, ny mpiantsena an-tserasera dia afaka manana orinasa mandefa mivantana any amin'ny fianakaviana sy namana fa tsy mandefa any amin'ny tenany ary avy eo mandefa any amin'ny fianakaviana sy namana.
Farany, safidio tsara ny safidy fandefasana entana sy orinasa an-tserasera. Ny safidy fandefasana rehetra dia tsy mitovy amin'ny fahamendrehana sy ny hafainganam-pandeha. Toy izany koa, ny orinasa rehetra dia tsy mitovy fahaizana amin'ny fandefasana haingana sy azo antoka amin'ny fividianana an-tserasera.
F: Misy olana hafa momba ny famatsiana tokony ho fantatry ny mpanjifa momba ny fotoam-pialan-tsasatra ve?
A: Orinasa maro no miatrika fanamby amin'ny fahabangan'ny stock ary miadana kokoa noho ny famenoana mahazatra. Ny tsipika ambany dia manana, amin'ny tranga maro, ny fangatahana ambony kokoa noho ny famatsiana. Ny mpanjifa dia mila mandinika fanitsiana roa farafahakeliny amin'ny fotoam-pialan-tsasatra.
Voalohany, aza mikoropaka, fa aoka ianao ho mavitrika. Ny tsy fitoviana eo amin'ny famatsiana sy ny tinady dia mety hiteraka tsy fisiana izay mety hanjary sarotra kokoa rehefa mandroso isika amin'ny faran'ny taona 2021.
Faharoa, jereo ny tetibola. Ny tsy fitovian'ny famatsiana/fangatahana dia mety miteraka (araka ny efa hitantsika) ny vidiny ambony. Fanampin'izany, amin'ny famatsiana vokatra voafetra, ny mpivarotra dia mety tsy ho vonona hanolotra fihenam-bidy lalina. Isika rehetra dia tia fifampiraharahana fa ny miandry azy ireo dia mety hampidi-doza kokoa amin'ity taona ity.
F: Na dia mety hanome tsiny ny talantalana miboridana eny amin'ny toeram-pivarotana fotsiny aza ny mpanjifa noho ny fahatapahan'ny rojo famatsiana, misy antony ve ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny tsy fahampian'ny akora ampiasaina eto?
A: Eny, fa amin'ny ankapobeny dia azo raisina ho toy ny fikorontanan'ny rojo famatsiana na farafaharatsiny hetsika miteraka azy ireo. Ohatra, raha misy orinasa mpanamboatra mikasa ny hamokatra vokatra 10,000 ao anatin'ny fe-potoana iray, fa ny tsy fahampian'ny mpiasa dia tsy ampy afa-tsy ny fahafaha-mamokatra 5,000, dia tapaka ilay drafitra. Ny 5,000 tsy hita dia mety hiteraka talantalana tsy hita maso any amin'ny toerana sasany. Ary ity dia ohatra iray amin'ireo olana maro izay mety hahatonga ny tsy fahampian'ny rojo famatsiana.
F: Farany, mandre matetika ny manam-pahaizana miresaka momba ny "normal vaovao" amin'ny rojo famatsiana. Na izany aza, amin'izao ankatoky ny faran'ny taona faharoan'ny valan'aretina izao dia toa mitombo ny fahasorenan'ny mpanjifa fa tsy mora ny famatsiana vokatra. No normal ve ny tsy fahampian'ny vokatra mitaiza?
A: Tsia. Tsy miombon-kevitra amin'ireo fitakiana feno fahasahiana ireo aho momba ny "normal vaovao" amin'ny rojo famatsiana. Amin'ny tranga maro dia hiverina amin'ny fepetra talohan'ny Covid. Misy maningana vitsivitsy amin'izany anefa. Heveriko fa hanohy hahita ny tsy fahampiana isika rehefa miverina amin'ny fahafaha-manao feno ny rojo famatsiana. Misy ihany koa ny olana momba ny fahaiza-manao izay haharitra ela kokoa, toy ny tsy fahampian'ny mpamily kamiao.
Amin'ny fanamarihana mamiratra kokoa, heveriko fa hisy ny haavon'ny fanavaozana ateraky ny Covid izay hampiakatra ny rojo famatsiana sasany ho amin'ny ambaratonga ambony kokoa, ary hitondra lanja be ho an'ny mpanjifa. Amin'ny ambaratonga mitranga izany, ny mpanjifa dia mety hiaina "tsara kokoa" ara-dalàna.